Tartanka Orodka Furan ee Maratoonka oo Degmada Bosaso lagu Qabtay[DAAWO/SAWIRRO] | SAHAN ONLINE
Tartanka Orodka Furan ee Maratoonka oo Degmada Bosaso lagu Qabtay[DAAWO/SAWIRRO]
BOSASO-Waxaa Maanta Magaaladda Boosaaso lagu qabtay Tartanka orodka Furan ee Mini Marathone ee Degmadda Bosaso
Tartanka ayaa waxaa ka qayb galayay 350 Orod yahan oo ka kala socday dhammaan Xaafadaha magaaladda iyo qaar ka mid ah xaafadaha Barakacayaasha iyadoo xaafad waliba laga soo xulay 10 Ciyaartooy oo u badan kuwo da’ yar ah.
Tartanka oo kasoo billaawday Xarunta Dowladda Hoose ee Jidka 30ka laguna soo gabagabeeyay Jidka Madaxtooyada ayaa waxaa kasoo qayb galay Wasiiradda wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliya C/raxmaan Sheekh Axmed, Duqa Degmada Bosaso C/salaan Bashiir Cabdulsaan, maamulka ciyaaraha ee degmadda iyo qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga Puntland oo maalgalinayay tartanka.
Orodkan oo ay soo qabanqaabisay dowladda hoose ee bosaso oo aahaa mid xiisa gaar ah leh ayaa waxaa kaalinta 1aad Galay C/raxmaan Cismaan Ismaaciil, waxaana la guddoonsiiyay 10 milyan oo shiling Somali ah, halka Cabdiraxmaan Siciid Shabcaan oo kaalinta labaad galay la guddoonsiiyay 6 Milyan oo shiling iyo Najiib Khaliif Bare oo kaalinta Saddexaad galay oo helay 4 Milyan oo Shiling.
Markii uu soo gabagaboobay Orodku waxaa kalmado dhiirigalin iyo hambalyan ah u u jeediyay dhalinyaradii guulaystay Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland C/raxmaan Shiikh Axmed iyo Duqa Degmadda Bosaso C/salaan Bashiir Cabdisalaan.
Waa markii u horraysay oo Tartan Maradoon oo gaaban oo furan lagu qabto Magaaladda Bosaso, kaasi oo ay ka soo qaybgaleen dhammaan dhalinyarada Xaafadaha Magaaladda, waxaana lagu tilmaamay tartanka mid dhiirigalinaya dhalinyarada, islamarkaana abuuraya jawi isdhexgal iyo amni ee Magaaladda.